Iingcebiso eziSixhenxe zokwenza iiThayile zeBathroom zihlala ixesha elide-IiFaucets zaseKitshini ezilungileyo 2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Blog / Iingcebiso ezisixhenxe zokwenza iithayile zangasese zihlale ixesha elide
Iingcebiso ezisixhenxe zokwenza iithayile zangasese zihlale ixesha elide
2021 / 09 / 12 uhleloBlog 2135 0
Isikolo seshishini lokuhlambela
Kutheni le nto iithayile zabanye abantu zixobuka kumakhaya abo amatsha kungekudala emva kokuba behlaziyiwe?
Oku kuyinyani ngakumbi kwiithayile zangasese, kwaye kungenxa yokuba awuzange wenze umsebenzi olungileyo xa ufaka iithayile.
Oku kulandelayo kukuxelela iingcebiso ezisixhenxe zokuthintela iithayile zangasese ekuweni!
1, Ukutsala iinwele kweBaselayer
Kudonga lwethayile lokuncamathelisa udonga ngaphambili, kufuneka uqale wenze umsebenzi olungileyo wengca-yengcambu umsebenzi wokutsala iinwele. Oku kukonyusa ukunamathela eludongeni, ukwenzela ukuthintela ukunamathiswa kweethayile emva kokuba imeko ingaqinanga. Sukulijongela phantsi eli nyathelo, eli nyathelo lidlala indima ebalulekileyo ekuthinteleni iithayile ukuba zingawi.
2, Iithayile zodonga ezifakwe emanzini
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba isiseko kufuneka sinkcenkceshelwe ngokupheleleyo kwaye sifumile ngaphambi kokuthayipha. Ngaphandle koko, ukufuma kudaka kuya kufakwa ngokukhawuleza kwisiseko esomileyo kunye neethayile kwaye zidibanise ngokukhawuleza. Oku kuyakuchaphazela ukukhawuleza kokuqina, kamva, emva koko kube lula ukuvela tile kwimeko, ke ukudibanisa iithayile zodonga kunye nokunkcenkceshela okunengca kubaluleke kakhulu.
3, Coca isiseko
Ukuba kukho udaka lwekalika, ipeyinti yeemulsion, iphepha lodonga, kunye nezinye izinto zokuhombisa eludongeni, okanye ukungcola emhlabeni, kufuneka kucocwe. Ngaphandle koko, udaka lwesamente alunakudibana kakuhle nesiseko. Ukongeza, ukuba kukho iintanda eludongeni uqobo, kufuneka zinyangwe ngaphambi kokuba iithayile zisetyenziswe. Oku kunokuthintela ukuqhekeka kwexesha elizayo ukuba kube kukhulu kukhokelele ekuthweni kweethayile zodonga okanye ukuwa kwimeko.
4, Zoba imigca
Ngaphambi kokufaka iithayile, kuya kufuneka ufumane umgca othe nkqo kwangaphambili. Iithayile ezigqityiweyo ngale nto njengeebenmarkmark ziya kufana kuphela ngobude kunye nokuma nkqo kubuhle. Ukongeza, ulwakhiwo ngaphambi kodonga kufuneka lukhutshiwe lujikeleze umgca wokulawula ukuphakama. Ukuphuma kweminqamlezo emhlabeni ukuze kuququzelelwe ulawulo lobungakanani bokwahlula iithayile.
Okokuqala, umbala, ubume kunye nokugqabhuka komphezulu weethayile kufuneka zikhethwe ngokungqongqo ngokweemfuno zoyilo zemizobo, emva koko zenziwe kwangaphambili ngokuhambelana neemfuno zemizobo. Ubungakanani, umbala kunye neempazamo zemvakalo ezinokuthi zenzeke kulwakhiwo lwaphambi kwexesha kufuneka zilungiswe kwaye zitshintshane de kufikelelwe kwezona ziphumo zibalaseleyo, emva koko zifakwe ngokucocekileyo ngokokuhamba kakuhle.
Iithayile kufuneka zenziwe i-1: 3 ngodaka olomileyo lwesamente. Ubunzima basemanzini kufuneka bulawulwe malunga ne-20mm. Umva weethayile kufuneka ube manzi ngaphambi kokuba kugangathwe, kwaye icala langaphambili kufuneka lomile. Beka iithayile kudaka lwesamente njengoko kufuneka kwaye ucofe umphezulu wethayile ngesando serabha de ibe yomelele kwaye icabalele. I-master master kwisicelo sodaka ngokubanzi iya kuthiwe ngokulinganayo, kukuthintela ukuvela kwe-tile bulging.
I-7, Ukudibanisa amalungu
Ithayile ihamba ngeeyure ezingama-24 emva kokucoca indawo yokucoca. Ukuloba phambi komthungo wethayile kufuneka kusulwe ukucoceka kokungcola, emva koko ubambeke kwi-caulk ekhethekileyo. Ngezi ndlela zingasentla zili-7, kuyasebenza ekunciphiseni ukwenzeka kokuphalala kwethayile, ndiyathemba ukuba uyakhumbula!
Ngaphambili :: IHuida Ware Sanitary Ware: Ingeniso yesiqingatha sokuqala sonyaka yayiyi-1.743 yezigidigidi zeYuan, ukonyuka kwama-32.38% ngonyaka-on-nyaka next: Ukukhula kwe-371% VS 70% Yehla! Ngaba uKhuphiswano lweNtengiso lweGumbi lokuhlambela lufikelele kwinqanaba le "White Hot"?
2021 / 09 / 24 3318